Mayelana nezinzuzo zezobulili zangempela nekhwalithi eliphezulu kubhalwe inombolo enkulu yezincwadi, izihloko. Isimo esiyinhloko ukuthi abalingani kufanele bahloniphe ukuhambisana kwalolu hlelo. Ngokuqondene nezinzuzo zowesifazane nomzimba wakhe, sizoxoxa kamuva esihlokweni.
Kuyaziwa ukuthi cishe wonke umuntu omele ubulili obuhle ukholelwa ukuthi unezinkinga ngokukhuluphala ngokweqile. Omunye akagculiswanga ngesinquno sakhe, abanye - ngeziqhwa, njalonjalo. Ngakho-ke, ucansi lubangela ukulahlekelwa kwesisindo ngokushesha. Uma ungenayo isikhathi esanele sokuya njalo ehholo lezemidlalo, izifundo zokudansa noma amaqembu okuzikhandla, noma konke lokhu akungenisi imiphumela efunayo, yizwa ukhululekile ukuxhumana nendlela enhle kakhulu. Ubulili bubeka inamba enkulu yokusebenza. Ngokwenza kanjalo, kusiza ukuqinisekisa ukuthi imisipha yakho nomzimba wakho uhlala kahle. Ochwepheshe bathi isigamu sehora lesigqila nomlingani singashisa amakholori ayikhulu namashumi amahlanu. Lokhu kungafaniswa nokuhamba noma isikhathi esifanayo sokudansa. Kodwa izinzuzo zocansi emzimbeni wesifazane akukhona lokhu kuphela. Phakathi nale nqubo ebalulekile, inani elikhulu okuthiwa i-testosterone likhiqizwa emzimbeni. Yilo-hormone evumela ukuthi uhlale ugcina imisipha yakho ikhohliwe.
Inzuzo yocansi yukuthi abantu abasebenzelana nayo njalo, cishe abahlushwa izifo zenhliziyo. Ososayensi bathi lezi zifo zingavinjelwa kalula uma ubheka njalo ukudla kwakho kanye nezinga lempahla ekhethekile egazini lakho. I-cholesterol. Nokho, akukhona konke okuvimbela ukuthuthukiswa kwezifo zenhliziyo nemithambo yegazi. Ubulili ngamaphesenti angu-50 kunciphisa amathuba okuba kwenzeke. Akusizo nje kuphela ubulili obuhle, kodwa nangenxa yesigamu esiphezulu sobuntu. Ubulili kufanele kwenziwe okungenani kabili ngesonto.
Ukungalali. Inani elikhulu labantu abahlala edolobheni elikhulu, babhekane nale nkinga engathandeki. Ngalo ungakwazi ukulwa ngezindlela eziningana. Isibonelo, ungathatha ukuguqula okhethekile ngendlela yamathebulethi, isisombululo noma ... ucansi. Ngokuvamile, ukulala nokushona kubangela ukucindezeleka nokucindezeleka okukhulu. Kubalulekile ukulwa nemiphumela yabo ngokusebenzisa ucansi. Kuzosiza ekunciphiseni ukucindezeleka kwakho, kukuvumela ukuba uphumule ngokuphelele. Ngemuva kobulili obuthandayo, abantu balala ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, kusukela ekucindezelekeni, owesifazane angasusa ngokushesha le ndlela, ngoba ubulili buyandisa imizwa yakhe.
Amasosha omzimba athola ushintsho olukhulu, kuye ngokuthi indawo yokuhlala, izimo nezinye izici eziningi. Inzuzo yocansi iwukuvikela imithi enkulu kakhulu. Uma owesifazane eyobhekana nalokhu ngaphezu kokuphindwe kabili ngesonto, umzimba wakhe uzokwazi ukubhekana nezifo ngokushesha. I-Orgasm kanye nobulili ngokwayo kwenza umzimba womuntu ukhiqize i-immunoglobulin eyabangela ukwakheka kwama-antibodies amasha alwa nama-virus.
Ukulimala nokuzuza ubulili kuchazwa emithonjeni eminingi. Ososayensi bacwaninga ngokucophelela umphumela wale nqubo emzimbeni wesifazane. "Kuyini ukusetshenziswa kobulili?" Abanye abantu babuza. Uma ungakwazi kakade lokhu, khona-ke uzinike isikhathi esincane kakhulu sokwenza uthando. Izibonelo ezimbalwa zokuthi ucansi lithinta kanjani umzimba womuntu kuye kwachazwa ngenhla. Nokho, lokhu akusikho konke. Ubusha besikhumba, umphumela we-analgesic, ukuvimbela izifo zesistimu ye-genitourinary - konke lokhu nokunye okuningi kuxhomeke ekujwayelekile kanye nekhwalithi yezocansi. Yingakho kufanelekile ukunaka le nqubo, ukunikeza isifundo esimnandi isikhathi esiningi. Ubulili buyojabulisa kuphela uma ozakwethu belalelana futhi baqaphele izifiso zohlangothi oluhlukile.
8 amathiphu kanjani savusa ngokushesha
Mayelana nabangane abasondelene ngokukhululekile: yikuphi ukuthunywa kwezithunywa zevangeli
Indlela yokwenza indoda yamjabulisa ubulili?
Izindonga zomuzi itshe: izinqumo nesibindi intrere yesimanje
EMS: elixutshwe ukubuyekezwa, kodwa ithemba lekusasa eliqhakazile kuyinto
Ioanna Hmelevskaya. Biography amanoveli
"Rondo", umlando band, discography, Ukwakheka
Lapho zaseHimalaya uthembela umzimba nomphefumulo
Thenga efulethini sesitimela: ezilingayo Ukunikeza
Imininingwane yokuthi ungayifaka kanjani i-oolong emilonyeni
Indawo yaseMalama Beach Holiday 4 * (Cyprus, Protaras): incazelo yehhotela nokubuyekezwa
Indlela ukukhetha umbala izinkuni ifenisha?